Egosiputa nke ochicho obi ya - Afrikhepri Fondation
Tuzdee, Septemba 21, 2021
Ihe ngosi nke ọchịchọ
Mmetụta nke agụụ mmekọahụ
Theonye iwe jidere na onye na-anwa ịchịkwa ya, igbochi ya ma ọ bụ imeri ya, ga-enyerịrị onwe ya n'ọnọdụ esemokwu. Esemokwu na-amalite n'etiti mmetụta abụọ na-emegiderịta onwe ha. Iwe choro igosiputa onwe ya dika ihe ike, ma o di n’ime ya.
Ngha a na-eduga na enweghị aha nke mkpụrụ obi na ntoputa nke pathologies. N'ihi na, ike a na-adịghị mma na-eme ka nsi na-emetọ psyche na nke na-esote, ọrịa ọrịa psychosomatic.
Mana, anyi aghaghi iju mkpali iwe anyi na obodo. Yabụ, anyị ga-anọchite anya ha nke mere na ihe a sublimated Materia prima na-anabata mmadụ niile.
Site na ọgwụgwọ nka, anyị na-agagharị na mkpali anyị na-emetụta mmụọ nke ọma site na ịdị mma nke okike nke onye ọkà ihe ọmụma ma anyị na-ewepu iru uju anyị, nchekasị anyị na ahụhụ anyị iji tinye akwa mkpuchi ọhụrụ: nke ịkọwa mma. Ọ bụ site na usoro alchemical nke a ka anyị na-eme ka ike anyị ghara ịdị njọ, na-agbanwe ya ma na-eme ka ọ bụrụ ike na ike okike.
N'ihi ya, nnwere onwe ikwu okwu dị mma karịa mkpagbu na mmanye n'ihi na nwoke nọ n'okpuru yok nke nrube isi dị ka anụ ọhịa nke dị njikere ịnwụde anụ ọ na-eri. Ime ihe ike ya sụgharịrị ịbụ naanị ime ihe ike n'ihi na ọ nweghị ụzọ ọpụpụ na ọ nweghị ike iji ya gosipụta ya na ndị ọrụ nka.
Ọrụ a, nke egosiputara site na okike nka, bu uzo mbu nke ike. N’ezie, ihe osise ndi n’awute n’ọgba ndị nna nna anyị ha mere bụ ngosipụta izizi nke mmuo ha maka ịlanarị. Ọrụ nka na-enye anyị ohere ịgbanwe ihe ndị na-eme ka anyị nwụọ ọnwụ bụrụ ihe okike mara mma. Ihe osise ndị a nwere akụkụ dị oke anwansi: nke ịgbanwe mkpali nke ọnwụ n'ime mkpali nke ndụ n'okpuru aha nke aha nna ahụ.
Ya mere, ọha mmadụ nwere nguzozi na-ekwe ka ihe ụmụ amaala ya kpaliri ka ha ghara ibibi ya. Mana, ọha na-arịa ọrịa na-atụba ndị ọrụ ọnwụ a n'ọgbọ agha wee mebie onwe ha.
Lelee Aquaman (2018)